10 Sababood oo aan ku taageeray madaxweyne Erdogan | shumis.net
Home » galmada » 10 Sababood oo aan ku taageeray madaxweyne Erdogan
10 Sababood oo aan ku taageeray madaxweyne Erdogan
Qalinka: Axmed Maxamuud
Djibouti(XeerNews)Dadka badhbay hoos marsan tahay sababta aanu Erdöğan u taageerayno islamarkaana uga soo horjeedno fawdo ku dhacda umad kale oo islaama, iyadoo mar horeba inta badan umadii islaamku dhiig baxayso. Sababtu waa sidan laakiin qofkastaa fahamkiisa wuu u madaxbanaan yahay:
1. Erdoğan waa ninka qudha ee maanta ku dhici kara in dal Islaama oo la hagar daamaynayo inuu yidhaahdo halaga daayo.
2. Wuxuu amray dadyowga Somalida ku abtirsada ee ku nool dalkan Turkey inaan habayaratee lagu dhibin inay dalkan joogaan, mararka qaar waxaan dareemaa in muwadiniinta wadanka wadanka u dhashay Somalidu ka xaq badan tahay – Qofka Turkiga ah lagama saamaxo sharciga hadii uu inyar ku xadgubo, Somalida waxaad moodaa in sharcigaba laga dhaafay, qaar wadanka sharci daro ku jooga ayaa la qabtaa oo inta sharci loo sameeyo suuqa lagu soo daayaa. Libyana iyo Masar-na kaagama sheekaynayo waxyaalaha Somalidu kala kulmaan.
3. Waa ‘Role Model’ madaxda Islaamku inay ku dayato oo dadkooda ugu adeegaan siduu dadkan ugu adeegay aanu rabno.
4. Waa ninka qudha ee garab jooga Muslimiinta la ciilayo. Syria, Ciraaq, Somalia, Libya, Falastiin iyo Yemen. Intaa wadan ee aan sheegay qaxooti ayuu dalkani ka hayaa. Erdogan hortii qof dalkani muu aqbali jirin.
5. Hore dalkani dooc iyo dareen toona umuu ahayn umadaha Islaamka, wuxuuba ahaa culays Islaamak saaran, xitaa martidu umay hoyan jirin ka hor Erdogan, markii Erdoğan qabsaday ayuu dalkani noqday mid la martiyo oo dadka soo dhaweeya.
6. Dalkan maanta waxa wax ka barta arday lagu qiyaasay inta u dhaxaysa ( 25’000 – 35000) oo deeq waxbarasho la siiyay iyo intaa in leeg oo iyagu iska bixiya. Hadii Erdogan meesha ka baxo dhamaan hawlahaa khayriga ahi waa ka kac. Soomalidu waa dadka ugu badan ee deeqahaa waxbarasho loo qaraabo kiilo.
7. Wuxuu dalkan ku hayaa 3 million oo Syrian ah, xisbiyada Turkey ka jira qaar badan ayaa balan qaaday inay dadkaa mastaafurin doonaan.
8. Dalkan Turkey wuxuu dhaqaalihiisa kasoo qaaday 200 billion dollar, wuxuu gaadhsiiyay 1 trillion dollar, waa shan jeer laab. Adduunyada meelna kamay dhicin horumar intaas leeg. Dhaqaalaha qayb badan oo kamida ayuu ku taageeraa umadaha Islaamka ee ciilan.
9. Erdögan wuxuu ‘Political Mission’ ka furay magaalada Hargeisa, waxay taasi sahashay in ardayda iyo dadka xanuunsanayaaba Vise Turkey si dhib u helaan iyagoo dalkooda jooga. Waa dalka qudha ee Africa ka baxsan ee xarun noocaasa ku leh Hargeisa.
10. Sanadihii 2015 iyo 2016 waxaan Ankara kula kulmay saraakiil ka tirsan wasaaradaha arimaha dibada Somaliland oo passport-ka Somaliland loogu dhuftay Vise-ha Turkey islamarkaana ogolaaday in Somaliland safiir usoo dirsato Ankara.
Intaa aan sheegay iyo ka badan ayaa lagula coloobay markaa inaad taageerto maxkaxda caafimaadka qabta ayaa ku siinaysa, hadii qof dareen Islaam ku jiro aad tahay, hadii kale adiga iyo garaadkaaga.
Sawirka hoose waa doontii Mavi Marmara oo dalkan Turkey u diray in lagu jabiyo cunaqabatayntii cir, dhul iyo badba ee Israel saartay Gaza sanadkii 2008.
Title: 10 Sababood oo aan ku taageeray madaxweyne Erdogan